Ngaba umoya opholileyo unokusetyenziselwa ukufudumeza ebusika? | Lianchuang
Isipholisi somoya singasetyenziselwa ukufudumeza ebusika. Izinto ezipholileyo zomoya zahlulwe zaziindidi ezimbini: enye iyaphola yohlobo olunye lwento efrijini, enye iyabanda kwaye ishushu iphindwe kabini isiphumo somoya opholileyo. Ezangaphambili zinokufakwa efrijini kuphela, kwaye eyokugqibela ayinakho ukwenza ifriji kuphela kodwa nobushushu, kodwa ixabiso libiza kakhulu xa kuthelekiswa.
Amanyathelo okhuseleko ekusebenziseni ukufudumeza komoya opholileyo ebusika:
1. Xa ugalela amanzi, sebenzisa amanzi amsulwa kangangoko ukunciphisa ukwanda kweentsholongwane ngexesha lokudibana kwamanzi. Ukongeza, amanzi etankini kufuneka ongezwe rhoqo kwaye atshintshwe rhoqo.
2. Emva kokuba umoya opholileyo usebenza ixesha elide, ukuvalwa kothuli kunye nokungcola kuya kuchaphazela ivolumu yomoya kunye nefuthe lokupholisa lesihluzi kunye nekhethini yomoya. Kungcono ukuyicoca rhoqo emva kweeveki ezimbini.
3. Xa usebenzisa izipholisi zomoya, umgama akufuneki usondele kakhulu. Ukuba kukho imfuneko, cinga ukusebenzisa ezinye izixhobo zokulungisa okanye zokulungisa.
Iicooler zomoya zinobushushu obungu-5-6℃ ngaphantsi kwabalandeli abaqhelekileyo. Banokusetyenziswa kwamandla aphantsi kunye nexabiso eliphantsi. Ezinye iimveliso zinomsebenzi wokufudumeza umoya kwaye zongeza ion ezimbi. Bancinci ngobukhulu kwaye kulula ukuhamba. Kuyabanda thana fan, kwaye usebenzisa amandla amancinci kunesixhobo somoya. Okwesibini, ifeni yokupholisa umoya inemisebenzi eyahlukeneyo (ion engalunganga / yokufudumeza umoya, njl.), Ekulungele ukuhamba.
Okokugqibela, ngaphantsi kweemodeli ezimbini zomoya opholileyo kunye nesifudumezi sesereferensi yakho. Siyathemba ukuba uya kubathanda.
Umzekelo akukho. I-DF-AF2808Khttps://www.gdszlian.com/df-af2808k-portable-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- kunye ne-oscillation-isuswe-itanki-yamanzi-2-ukuseta ubushushu-i-eco-function-imd-control-product /
Umzekelo akukho. I-DF-AT2501KG1https://www.gdszlian.com/df-af2501kg1- tower-4-in-1-evaporative-air-cooler-with-ptc-heater-humidifier-and-air-purifier-functions-3-fan-speeds- kunye ne-oscillation-90oscillation-2-ukuseta ubushushu-i-eco-function-touch-control-product /